ပုံတစ်ပုံက ISO, MDF / MDS, NRG နေ DISC ကိုမီးရှို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီတခါတရံစသည်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းအစီအစဉ်များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူက ISO images နဲ့အခြားသူတွေကို download လုပ်ပါတစ်ခါတလေသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြုပါ, တခါတရံအမှန်တကယ်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် - .. CD ကိုသို့မဟုတ် DVD ကို drive တခုဖြစ်တယ်။
ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, ပုံရိပ်တစ်ခုကနေ disc ကိုမီးရှို့ခြင်း, သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံ play တာပေါ့သည့်အခါလိုအပ်ပါနှင့်ပြင်ပမီဒီယာ CD / DVD ကိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက် (ရုတ်တရက်သတင်းအချက်အလက်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနှင့် operating system ကိုပျက်ကျလုယူပါလိမ့်မယ်), နှင့်သင်က Windows ကို install ဖို့ disk ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆောင်းပါးထဲမှာရှိသမျှသောမိခင်များကိုသင်ပြီးသားရှိတယ်ညာဖက်ဒေတာနှင့်တကွသင်၏ပုံသဏ်ဌာဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့ဆက်လက် ...
အဆိုပါ disk ကိုပုံရိပ် MDF / MDS နှင့် ISO ၏ 1. မှတ်တမ်း
ဤအရုပ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အစီအစဉ်များများစွာရှိပါသည်။ image ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဘယ်လိုကောင်းကောင်း, program ကိုအရက် 120% အပေါင်း screen ပေါ်မှာအသေးစိတ်ပြသ - ကြောင်းကိစ္စများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခုစဉ်းစားပါ။
စကားမစပ်ဒီ program ကိုကျေးဇူးတင်ပုံရိပ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်မသာပေမယ့်လည်းသူတို့ဖန်တီးရန်အဖြစ်အတုယူရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အတုယူ, ထိုအစီအစဉ်တွင်ဖြစ်ကောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာ: သင်ပြီးသားအပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်နိုင်သည့်သီးခြားကို virtual drive ကိုခံယူ!
1. Program ကို Run ပြီးအဓိက window ကိုဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့ကို select ဖို့လိုအပ်ပါတယ် "ရုပ်ပုံများ Burn CD / DVD ကို။ "
2. ထို့နောက်အလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ဖို့ image ကို specify ။ စကားမစပ် program ကိုသငျသညျကိုသာအသားတင်ပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သမျှသောလူကြိုက်အများဆုံးပုံများ, ထောက်ခံပါတယ်, ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါရန် - မှာ "Browse ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကြှနျတေျာ့ဥပမာမှာ 3. ငါက ISO format နဲ့မှတျတမျးတငျထားတဦးတည်းဂိမ်းအတူပုံရိပ်ကို, ရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ပစ္စည်းတွေရှိပြီးပါကလိုချင်သောရွေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ စည်းကမ်းအတိုင်း, စက်မှန်ကန်သော program ကိုအသံဖမ်းရွေးချယ်သည်။ မှာ "Start ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်သင်ရုံ disc ကိုအပေါ်ပုံရဲ့မှတ်တမ်းတင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, ဒီစစ်ဆင်ရေး 5.4 မှ 10 မိနစ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ (Write Speed ​​ကိုသင့်ရဲ့ CD ကိုရောနှငျ့သငျရှေးခယျြထားအမြန်နှုန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, disc ကိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ဖြစ်ပါတယ်) ။
2. NRG ၏ပုံရိပ်ကိုအသံဖမ်း
ပုံရိပ်၏ဤအမျိုးအစားနီရို program ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုဤဖိုင်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ထုတ်လုပ်ရန်အကြံပြုလိုတယ်။
အများအားဖြင့်ထိုအပုံရိပ်များကွန်ယက်၌တွေ့နေသော ISO နှငျ့ MDS ထက်အများကြီးလျော့နည်းသည်။
1. ပထမဦးစွာနီရို Express ကို (အမြန်မှတ်တမ်းတင်ဘို့အလွန်အဆင်ပြေသောအရာသေးငယ်တဲ့ program ကို) ကိုဖွင့်။ (အောက်ခြေမှာပုံရိပ်ပေါ်) ပုံတစ်ပုံကိုမှတ်တမ်းတင် option ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ထိုအခါ disk ကိုအပေါ် image file ကိုတည်နေရာအမည်ကို။
2. ကျနော်တို့သာ image ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အသံဖမ်းရှေးခယျြနှင့်အသံဖမ်းက start button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
တခါတရံကမှတ်တမ်းတင်အမှားကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်နှင့်ကတချွတ် drive ကိုကြီးလျှင် - ကလုယူပါလိမ့်မယ်။ အမှားအယွင်းများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် - နိမ့်ဆုံးမြန်နှုန်းမှာပုံရိပ်တစ်ခုမှတ်တမ်းတင်။ သင်က Windows system ကိုကနေ disk ကိုပုံရိပ်မှကူးယူသည့်အခါအထူးသဖြင့်ဒီအကြံပေးချက်ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ကျနော်တို့က ISO ပုံရိပ်တွေအကြောင်းပြောနေတာပါကလမ်းဖြင့်, ငါ Ultra ISO ကိုကဲ့သို့သော program တစ်ခုနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကိုဖန်တီးဖို့, ဤရုပ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြု, နှင့်အထွေထွေအတွက်ဖြစ်နိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ကြောင့်ဒီ post အတွက်ကြော်ငြာအစီအစဉ်များကိုမဆိုကျော်ဖြတ်လိမ့်မည်ဟု slukavlyu မဟုတ်!